Qeybta:Sheekada Saameynta5 min akhris
Waxay ka bilowday kaniisad yar oo ku taal xaafadda Lyndale ee Minneapolis saddex sano ka hor. Koox ka kooban 20 qof oo kiraystayaal ah ayaa kulmay si ay ugala hadlaan dhibaatooyinkooda ku aaddan nidaamka guryaha ee Minneapolis-St. Aagga Booska Booska.
Wixii Esperanza oo ah hooyo seddex ah oo aan ku heshiinay inay magaceeda hore u aqoonsadaan, waxay macnaheedu tahay inay baranbarada ka soo saarto taarikada iyo dharka carruurteeda, iyo xitaa marka ay seexdaan habeenkii. Kiraystayaasha kale waxay ka hadlayaan welwelka ku saabsan mugdiga madow ee derbiyadooda ku jira iyo waxa saameyn ku yeelan kara caafimaadka ilmahooda. Esperanza ayaa la wadaagay, ka dib markii ay gurigeeda ku soo noqotey maalin dheer oo ay ku jirtay shaqadii warshadeeda, waxay ka heli lahayd biyaha ka soo daata saqafka, ama waxay ogaanaysaa in foornada la gooyey dhimashada jiilaalka. Milkiilaha gurigiisu wuxuu iska dhejiyey codsiyada soo noqnoqonaya si uu u sameeyo dayactir aasaasi ah.
Laga soo bilaabo kulankan kowaad wuxuu yimid urur cusub oo u diyaargaroobay inuu u istaago xuquuqda kireystayaasha: Inquilinxs Unidxs pic Justicia (United Renters for Justice). Magaaladda guryaha la awoodi karo ayaa sii xumaanaya, kooxdu waxay dareenka ka qabtaa arrimaha sida kor u kaca kirada iyo dayactirka aan caadiga ahayn. Xubnahoodu waxay qabtaan mulkiilayaasha miisaaniyad iyo awood kiraystayaal sida Esperanza. Iyadu iyo deriskeeda hadda waxay leeyihiin qalab iyo taageero si ay ula dagaallamaan xaaladaha xun ee gurigooda.
Filiberto Nolasco Gomez, oo ah cilmi-baarayaal ka shaqeeya Adeegyada Shaqaalaha Caalamiga ah, wuxuu qeexayaa saameynta guryaha haqab-tirka ah ee guud ahaan suuqa kirada.
Sababtu Maxay tahay Wadahadallada Guriyeynta Lacageed ee Lacagta La Yidhaahdo Waxay U Baahan Tahay Inaad Kordhiso Kiraystayaasha
Kiraystayaasha waxay ka kooban yihiin kala badh dadka ku nool Minneapolis, halkaas oo aysan marnaba ku adkaan inay helaan meel hagaagsan, oo la awoodi karo inay kireysato.
Diiwaangeli shaqooyinka bannaan ee hooseeya iyo mushaarka joogtada ah ama hoos u dhacaya waxay ka dhigaan guryo badan oo magaalada ka mid ah oo aan loo dulqaadan karin kireystayaal badan. Iyada oo ay jiraan fursado dhowr ah oo wanaagsan, dad badan waa in ay u jeedaan qaybo guriyeyn ah oo ay ku suurtagasho in mulkiilayaashu ay ka faa'iidaystaan kiraystayaasha leh kireysi bil bil ah, ama ciqaab adag oo loo geysto dambiyada yaryar sida ciyaaraha cawska ama si kooban u dhigaya bacda raashinka ee horay loo soo galo . Xayiraadaha noocan oo kale ah ayaa ka tagaya kireystayaal badan oo ku nool cabsi joogta ah.
"Waxaan mar walba ka cabsaneynaa in milkiilaha dhismuhu uu ka soo baxayo isla markaana uu ka saaro alaab qoys ka soo jeeda oo ka dhigo inay baxaan," ayuu yiri Esperanza.
Wadahadalka ku saabsan abuurista iyo joogitaanka guryaha la awoodi karo badanaa iska dhego tiray xaqiiqo muhiim ah: waa qaybta gaarka loo leeyahay oo bixisa inta badan guryaha kirada ee gobolka, maaha kooxaha samafalka ama xukuumadda. Iyadoo ay horumarineyso unugyada cusub ee guryaha iyo sameynta guryaha hadda jira oo la awoodi karo ayaa ah xeeladaha muhiimka ah si loo dejiyo suuqa kirada, waxay si cad u caddaatay in dhismaha ama kabidda habka ka baxsan dhibaatadan aysan suurtagal ahayn.
Coming together si wadajir u samee xalal cusub
Hay'adda McKnight Foundation waxay u aragtaa guryo ku filan oo la awoodi karo inay qayb ka noqoto kobaca dhaqaalaha iyo barwaaqada gobolka. Cilmi baaris ayaa muujinaysa in carruurta leh guryo xasillooni ay ku fiicnaadaan dugsiga, shaqaalaha waxay u badan tahay inay awood u yeeshaan inay shaqeeyaan, qoysaskuna si fiican ayey u soo baxaan iyagoo ka baxsanaya faqriga saboolnimada. Tani, marka hore, dhammaan waxtar ayaa naga hela.
Si loo daboolo caqabadda abuuritaanka guryaha xasiloon oo la awoodi karo, McKnight's Barnaamijka Gobolka iyo Bulshada waxay u arkaan xalal u baahan in la sii wanaajiyo isku-duwidda iyo iskaashiga dhow.
Labadii sano ee la soo dhaafay, McKnight wuxuu isku-duba-ridey mulkiilayaasha, kireystayaasha, garsoorayaasha maxkamada guryaha, hay'adaha adeegga bulshada, iyo hay'adaha gargaarka sharciga, iyo sidoo kale gobollada iyo magaalada, si loo horumariyo loona fuliyo xalalka.
"Waxaan bilaabnay inaan sheeganno xuquuqdeena kireystayaasha. Qof kasta wuxuu bilaabay inuu dalbado waxa ay u baahan yihiin. Rakib tuubooyinka qubeyska, tuubooyinka qubeyska. Ka tiri barafka iyo barafka hurdada. " -PERANANZA, TENANT ORGANIZER
Mid kastaa wuxuu leeyahay door muhiim ah oo uu ku ciyaaro. Dawladaha hoose waxay bixin karaan ruqsadda iyo kormeerka kormeerka ah, kormeerka waqtiga, iyo fulinta marka loo baahdo. Xaafadaha ayaa isku duubi kara oo u doodaya kiraystayaasha, inay la shaqeeyaan madaxda milkiileyaasha guryaha iyo magaalooyinka oo ah wada-hawlgal, iyo inay kor u qaadaan bulsho soo-dhaweyn leh dhammaantood. Milkiilayaashu waxay ula dhaqmi karaan kiraystayaashooda si sharaf leh. Si aad u samayso waxay u badan tahay inay kicinayso xeerar badan iyo shaki ku saabsan ganacsigooda oo dhan. U doodaha sharciga iyo maxkamadeynta sii kordhaysa ee cusub ee guryaha ayaa ka caawin kara dhinacyada in ay ka fogaadaan dacwad aan loo baahneyn oo hubina in caddaaladdu ay tahay mid cadaalad ah oo degdeg ah, si loo ilaaliyo qoysaska lana xaajoodo xisbiyada.
Kireeyayaasha kooxo sida Inquilinxs Unidxs, deeq bixiye McKnight, kaalintooda waa cad yahay. "Waxaan bilaabnay inaan sheeganno xuquuqdeena kireystayaasha," ayuu yiri Esperanza. "Qof kasta wuxuu bilaabay inuu dalbado waxa ay u baahan yihiin. Rakib tuubooyinka qubeyska, tuubooyinka qubeyska. Ka tiri barafka iyo barafka hurdada. "
Iyadoo horay loo qaabeeyey waxay bilaabeen inay arkaan horumarka, xitaa waxay badiyeen mid ka mid ah Hennepin County ugu weyn kiisaska maxkamadda guryaha ka dhanka ah Milkiilaha Minneapolis ee gacanta ku haya in ka badan 60 guryaha kirada ah. Maxkamad ayaa ku ganaaxday $ 187,390, ciqaabkii ugu weynaa ee lagu soo rogay taariikhda 27-sano ee maxkamadaha guryaha ee Minnesota.
Inquilinxs Unidxs xubnuhu waxay dhagaystaan inta kireyste kale oo kale oo sharaxaya dariiqa guriyeynta.
Isbuuc kasta, Esperanza waxay ka soo qaybgashaa kulamada kireysiga ee Inquilinxs Unidxs. Qolka waxaa ka buuxsamay sawirro muuqda oo ku saabsan ololaha abaabulidda iyo dibad-baxa waddooyinka, iyaga oo xasuusinaya guusha. Tani waa halka ay wadaagaan riyooyinkooda sanadka soo socda iyo in la xoojiyo waxa la qabanayo ee xiga.
"Waxaan doonayaa inaan ku noolaado magaalo halkaas oo aan mudnaanta siinno nolosha faa'iido," ayaa tiri hal xubin koox.
"Waxaan doonayaa inaan ku noolaado magaalo halkaas oo aan mudnaanta siinno nolosha." - INQUILINXS UNIDXS MEMBER
"Waxaan jeclaan lahaa inaan arko iskaashiyo dheeraad ah oo lala yeesho ururrada kale iyo ka saarista dhaleeceynta la xidhiidha guryaha la awoodi karo, Qeybta 8, iyo dadka saboolka ah," ayaa yiri mid kale. "Waxaan rabaa in ijaarayaasha loo arko in ay xaq u leeyihiin magaalo sidan oo kale ah macaamiisha."
"Waxaa jira cadaalad daro iyo waxyaabo badan oo badan," ayuu Esperanza ku yiri isagoo indhaha ku haya ilmo. "Rajadaydu waxay tahay in Inquilinxs Unidxs marnaba la waayo, iyo in ururo dheeraad ah ay ka bartaan waxa aan sameyneyno iyo bilaabaan qaadashada shaqadan, sidoo kale. Dad badan ayaa u baahan caawimaadkan. "
Marka ay kooxdu u diyaargaroobeyso in ay dib u dhigto, qolku wuxuu ku dhuftamayaa dhawaaqyada kiraystaha loo go'aamiyey. "Arriba con la gente!" Waxay ku hadlaan. "Laga soo bilaabo dadka!"
Ku biir Dhaqdhaqaaqa Samafalka Cimilada: Wadahadal lala yeesho Noa Staryk
By Xarunta Qaranka ee Filashada Qoyska Juun 2022
McKnight wuxuu ku taageeraa beerista-Climate-Smart Deeqaha rubuc-labaad